कसरी बढाउने रोग प्रतिरोधी क्षमता ? – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
जस्तो कि, कुनैपनि संक्रामक रोगबाट बच्न भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्छ । शारीरिक सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ । पोषिलो र सन्तुलित खानपान गर्नुपर्छ । र, शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु नै एक बलियो प्रतिरक्षा प्रणालीको लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । हाम्रो शरीरको हर अंगले त्यसबेला मात्र सही एवं चुस्त ढंगले कार्य सम्पादन गर्छ, जब त्यसमा स्वस्थ्य खानपान र सकारात्मक वातावरण प्राप्त हुन्छ । जीवनमा तनाव कमभन्दा कम होस् । पर्याप्त निद्रा लिइयोस् । निद्रा र रोग प्रतिरोधक क्षमतावीच गहिरो सम्बन्ध छ । कम वा खराब गुणवत्ता निद्रा, कोराना वा अर्को रोगको कारण बन्न सक्छ ।
एक अध्ययन अनुसार जुन मान्छे हरेक रात ६ घण्टाभन्दा कम सुत्छन्, तुलनात्मक रुपमा उनीहरुलाई चाडै रोगले समात्छ । खासगरी चिसो वा रुघा-खोकीले च्याप्छ । त्यसैले निद्रालाई पनि एक ओखती समान मानिएको छ ।
उमेर बढ्दै जाँदा शारीरिक गतिबिधि सुस्त हुँदै जान्छ । यसको अर्थ यो होइन कि, हामी पूर्णत निस्त्रिmय हुन्छौं । नियमित शारीरिक गतिविधिले प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ । यसले हाम्रो शरीरलाई संक्रामक रोगबाट बचाउँछ । त्यसैले शरीरलाई सक्रिय राख्नका लागि नियमित व्यायाम गर्नैपर्छ । व्यायामलाई आफ्नो दैनिकीको एक हिस्सा बनाउनुपर्छ ।
टर्रो फल र सागसब्जी भिटामिन सिले भरपुर हुन्छ । यस्ता खानेकुराको सेवनले शरीरमा सेतो रक्त कोष बढाउन सहयोग गर्छ, जुन संक्रामक रोगबाट बचाउन जरुरी हुन्छ । याे खवर अनलाइन खवरबाट शाभार गिरएकाे हाे ।
Tags: कसरी बढाउने रोग प्रतिरोधी क्षमता ?
Previous अनलाइनबाटै मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा सुरु
Next यस्तो शहर, जहाँ शपिङदेखि रेष्टुरेन्टसम्म नाङ्गै जान्छन् मानिसहरु